စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက် Ultimate Tech Stack | Martech Zone
သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 11, 2020 သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 11, 2020 Izabelle Hundrev
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်စွန့် ဦး တီထွင်သူ Marc Andreessen သည်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ software ကကမ္ဘာကြီးကိုစားနေတယ်။ နည်းများစွာဖြင့် Andreessen မှန်တယ်။ သင်နေ့စဉ်အသုံးပြုသည့် software tools မည်မျှရှိသည်ကိုစဉ်းစားပါ။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးတည်းတွင်ရာနှင့်ချီသောဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ်များရှိနိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒါကမင်းရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကစက်လေးတစ်ခုပဲ။
အခုဒီစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ကိုစီးပွားရေးလောကမှာအသုံးချကြစို့။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းသည်ရာနှင့်ချီ။ မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆော့ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုသုံးနိုင်သည်။ ဘဏ္financeာရေးမှသည်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်ရောင်းအားအထိဌာနတိုင်းသည်အချို့သောစွမ်းဆောင်ရည်များ၌နည်းပညာကိုမှီခိုကြသည်။ ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အဓိကကျတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ များစွာသောခေတ်သစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များသည်အဖွဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောစီမံကိန်းများကိုစီမံခြင်းနှင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခြေရာခံရန် software-as-a-service (SaaS) ဖြေရှင်းနည်းများကိုအားထားနေရသည်။ ဒါပေမယ့်ကျော်နှင့်အတူ 7000 SaaS ထုတ်ကုန်များစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ရုံကခွဲထုတ်ရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်များ မှ ကောင်းတဲ့အရာများ.
ဤဆောင်းပါး၌မည်သည့်ဆော့ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာနှင့်အဘယ်ကြောင့်အရေးပါသည်ကိုအတိအကျဆွေးနွေးပါမည်။ Plus အားငါလမ်းတလျှောက်တွင်အချို့သောတိကျသောဥပမာများကိုမျှဝေပါလိမ့်မယ်။
Marketing Stack ဆိုတာဘာလဲ။
ဝေါဟာရ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး stack စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများကသူတို့၏အလုပ်များကိုလုပ်ရန်အသုံးပြုသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာများနှင့်နည်းပညာများစုဆောင်းခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာသာ။ ကြီးစွာသောထီးသက်တမ်းအောက်မှာကျရောက်ပါတယ် နည်းပညာ stack အိုင်ပီကျွမ်းကျင်သူများက application development အတွက်မူဘောင်များနှင့်မူဘောင်များထည့်သွင်းရန်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။
Ultimate Marketing Tech Stack ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ
ယနေ့ခေတ်တွင် software အတွက်နီးပါးရှိသည် အားလုံး။ ငါမြင်သည့်အတိုင်း SaaS ကိရိယာနှစ်မျိုးရှိသည်။ မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်များ နှင့် ကောင်းတဲ့အရာများ.
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများသည်သင်၏အလုပ်တာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအရာများမှာကောင်းမွန်ပြီးရုံမျှသာရှိသည်။ သူတို့ကသင့်ကိုပိုပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုရှိဖို့၊ စနစ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့မပါဘဲမင်းရဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအမှီပြုရန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာလို့လဲဆိုတော့ software ကစျေးကြီးတယ်။ တကယ်စျေးကြီးတယ် မည်သည့်ကိရိယာများသည်မည်သည့်ကိရိယာများလိုအပ်သည်ကိုသေချာစွာမစဉ်းစားပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အသုံးမပြုရသော software လိုင်စင်များအတွက်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ဖြုန်းတီးနိုင်သည်။
ထို့အပြင် SaaS ထုတ်ကုန်များလွန်းခြင်းကရှုပ်ထွေးစေပြီးစနစ်တကျနေထိုင်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ ဆော့ဗ်ဝဲကသင့်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်၊
အောက်တွင်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ stack အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော SaaS tools များစာရင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဖောက်သည်များ၏ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု (CRM) ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးပွားစေရန်နှင့် ၄ င်းတို့၏လက်ရှိနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်ကူညီရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
CRM ကိရိယာအများစုသည်ဖောက်သည်အချက်အလက်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုသိုလှောင်သည့်ဒေတာဘေ့စ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒီကိရိယာထဲမှာ၊ သုံးစွဲသူများသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်ဆက်နွယ်မှု၏သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးနှင့်လက်ရှိတိုးတက်နေသောအရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
CRM software ကိုအဓိကအားဖြင့်အရောင်း၊ စျေးကွက်နှင့်အမှုဆောင်အဖွဲ့များကအသုံးပြုသည်။
အရောင်းအဖွဲ့များသည်အလားအလာများနှင့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုစည်းရန် CRM ကိုအားထားသည်။ အမှုဆောင်အရာရှိများသည်ဝင်ငွေနှင့်ရောင်းချမှုပိုက်လိုင်းကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်အလားတူအသုံးပြုကြသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် CRM သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရည်အချင်းပြည့်မှီသော ဦး ဆောင်မှုနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုခြေရာခံရန်အသုံးဝင်သည်။
စျေးကွက်တွင်ရာနှင့်ချီသောကွဲပြားခြားနားသော CRM ကိရိယာများရှိသည်။ ဤတွင်ထင်ရှားသောစုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်။
Salesforce - Salesforce သည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် cloud-CRM software ကို ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်။ CRM သည် Salesforce ၏အဓိကကမ်းလှမ်းချက်ဖြစ်သော်လည်းဖောက်သည်များ ၀ န်ဆောင်မှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များပါ ၀ င်သည်။ နီးပါးနှင့်အတူ ၁၉% စုစုပေါင်းစျေးကွက်ဝေစုSalesforce သည် CRM နေရာကိုလွှမ်းမိုးသည်။ ထို့အပြင်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်အတွက် - အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်သို့ရောက်သောအခါ platform သည်အသုံးပြုသူများနှင့်သုတေသီများအကြားတွင်၎င်း၏ကြံ့ခိုင်သော cloud စွမ်းရည်များအတွက်ထိပ်တန်းအဆင့်တွင်ရှိသည်။
ဆက်သွယ်ရန် Highbridge Salesforce အကူအညီအတွက်
ဒီထက်နှောင့်အယှက် CRM - စိတ်ရှုပ်စရာနည်းသော CRM သည်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းနေပြီးသင်က“ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်” ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။
နည်းသောစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် CRM အတွက်စာရင်းသွင်းပါ
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်အဖွဲ့များအားဆက်သွယ်ရေးများကိုချောမွေ့စေရန်၊ လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုစီမံရန်နှင့်လက်ရှိစီမံကိန်း၏ရှေ့ပြေးအရိပ်များကိုဆက်လက်ထားရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤအမျိုးအစားမှဖြေရှင်းချက်များစွာသည်သင့်အားနေ့စဉ် / အပတ်စဉ်အလုပ်များအတွက်စိတ်ကြိုက်လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုဖန်တီးရန်သင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်၏အဖွဲ့သည်အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဝေးမှအလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု software များဥပမာ
Asana ဟာ - Asana သည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အမြဲတမ်းထိပ်တန်းစီမံချက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖြေဖြစ်သည်။ ဒီ tool သည်ပူးပေါင်းခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသောလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ Asana သည်အဖွဲ့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသာမကတစ် ဦး ချင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုပါပံ့ပိုးပေးသည်။ အသုံးပြုသူအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစီးဆင်းမှုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်မိမိတို့၏လုပ်ငန်းများကိုပြက္ခဒိန်တစ်ခုထဲ၌ပင်တည်ဆောက်နိုင်ပြီး၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်လွယ်လွယ်ကူကူသိရှိနိုင်သည်။
ရှုံ့ချသည် Wrike သည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်တည်ဆောက်ထားသည့်စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Wrike သည်စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းများများစွာပေါင်းစပ်ထားသော်လည်းဖြေရှင်းနည်းသည်အလယ်အလတ်စျေးကွက်နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အပြည့်အ ၀ လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
2016 ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီသည်ဘုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုတုပရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့် Wrike for Marketers ကိုထည့်သွင်းရန်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်းများကိုစည်းရုံးရန်နှင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု၊ အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သွားဈေးကွက်သို့တင်ခြင်းစသည့်ဘုံဆောင်ရွက်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကူညီရန်အတွက် Marketers for Wrike သည်ထူးခြားသောနေရာတွင်ရှိသည်။ ဒီ tool သည်သင်စတင်နိုင်ရန်ကူညီရန်အတွက်စီမံကိန်းတင်းပလိတ်များကိုပင်ပေးသည်။
marketing ကို Automation
Marketing အလိုအလျောက်ဆော့ဝဲလ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များအား ဦး ဆောင်သောမျိုးဆက်၊ လူမှုမီဒီယာတင်ခြင်းနှင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုအလိုအလျောက်ကူညီပေးသည်။
ဤကိရိယာနှင့်ပါ ၀ င်သောအချိန်ကုန်သက်သာသည့်အကျိုးကျေးဇူးများအပြင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလိုအလျောက်ဆော့ဖ်ဝဲသည်မတူညီသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်လက်ဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမလိုအပ်ဘဲသီးခြားစာတိုပေးပို့ရေးကိုဖန်တီးရန်ကူညီသည်။ ထိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုသင်အချိန်မရွေးလည်ပတ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုသင်စီမံရန်သင်မရှိချေ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကိရိယာများကိုအခြားနည်းပညာများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးတစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်လေ့ရှိသည်။
HubSpot - HubSpot သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်အရောင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးရန်လူကြိုက်များသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ HubSpot ၏စျေးကွက်ဗဟိုသည်ပလက်ဖောင်း၏ထိပ်တန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်သည်။ ဒီ tool နှင့်ဆက်စပ်သောစွမ်းရည်တစ်ခုအနံရှိပါတယ် ခဲမျိုးဆက်, အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။
အတူ Started Get HubSpot
MailChimp - အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်းမှအစပြုခဲ့ရာသည် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည့် Mailchimp ၏လူကြိုက်များသော all-in-one စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
Mailchimp သည် ၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စျေးနှုန်းအစီအစဉ်များကြောင့် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အထူးနှစ်သက်သည်။
၎င်းတို့၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခြေခံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အခမဲ့မော်ဒယ်တစ်ခုရှိသည်။ Mailchimp သည် tool ကိုအသုံးပြုရန်သာစီစဉ်ထားသည့်အသင်းများအတွက် ပေးဆောင်ရမည့်အစီအစဉ်ကိုပင် ပေးဆောင်ထားသည်။ ဒီနေရာမှာရှိတယ်.
Search Engine Optimization Tools များ
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှု (SEO) ဆော့ဝဲလ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားသူတို့၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုအဆင့်များတိုးတက်စေရန်နှင့်ပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်လာစေရန်ဖန်တီးထားသည်။
SEO ကိရိယာများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်သော့ချက်ကျသောသုတေသနပြုခြင်း၊ backlinks များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုးတက်မှုကိုခြုံငုံ။ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ရှိပြီးသားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏စစ်ဆေးမှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ဤဖြေရှင်းချက်များစွာတွင်အသုံးပြုသူများ၎င်းတို့၏ SEO အားထုတ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခြေရာခံနိုင်ရန်နှင့်တိုင်းတာရန်အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် built-in analytics စွမ်းရည်များရှိသည်။
အထိရောက်ဆုံးစျေးကွက်မြှင့်တင်မှုသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အားဆုံးဖြတ်ချက်များကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြုလုပ်နိုင်စေသည်။ SEO တစ်ခုအနေနှင့်၊ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသော့ချက်ကျသောသုတေသနပြုကိရိယာကိုကျွန်ုပ်ရယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည် Semrushဂူဂဲလ်သို့မဟုတ် Adobe Analytics ကဲ့သို့သောတည်ဆောက်ခြင်းကိရိယာနှင့် Ahrefs ကဲ့သို့ချိတ်ဆက်မှုတည်ဆောက်ခြင်းကိရိယာ။ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကကောင်းဖို့ကောင်းပေမယ့်မလိုအပ်ပါဘူး။
မှအကြီးတန်း SEO ကျွမ်းကျင်သူ Liam Barnes ညွှန်ကြားချက်
SEO software ကိုဥပမာများ
သတင်းကောင်း။ SEO software ကိုဘယ်လိုအသုံးချရမယ်ဆိုတာကိုကျွမ်းကျင်ဖို့မလိုပါဘူး။
SEO ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းများစွာသည်စတင်သုံးစွဲသူများအတွက်ပင်အလိုလိုသိပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပိုမိုဆော့ဖ်ဝဲ software ကိုစွမ်းရည်များလိုအပ်ကြောင်းလိုအပ်ကြောင်းလည်းအဲဒီမှာထွက်ခေတ်မီ SEO ဆိုသည်မှာ tools များရှိပါသည်။ ၎င်းသည်သင်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်မည်သည့်ရည်မှန်းချက်ကိုပြီးမြောက်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဟူသောအချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Ahrefs - Ahrefs သည်သော့ချက်ကျသောသုတေသနပြုခြင်း၊ ရာထူးခြေရာခံခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်းစသောစွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးရှိသောပြည့်စုံသော SEO ကိရိယာများစုံလင်သော suite ကိုပေးသည်။ ဤသည် all-in-one ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးကွက်သမားများနှင့်အတွေ့အကြုံအားလုံးရှိ SEO ကျွမ်းကျင်သူများကိုသူတို့၏အော်ဂဲနစ်အသွားအလာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်။
သင်၏ Ahrefs စမ်းသပ်မှုကိုစတင်ပါ
Ahrefs သည်အဓိကအားဖြင့် backlink tool တစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်၎င်း၏တိုးချဲ့ထားသောကမ်းလှမ်းမှုများသည်ကုမ္ပဏီကို SEO နေရာတွင်အဓိကကစားသမားအဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ အရာအားလုံးကို (လုနီးပါး) လုပ်သည့်ရိုးရှင်းသော on-page SEO tool တစ်ခုသင်လိုအပ်ပါက Ahrefs သည်သင့်အတွက်ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
ScreamingFrog ၏ SEO ပင့်ကူ - ScreamingFrog သည် SEO Spider ထုတ်ကုန်အတွက်လူသိများသောယူကေအခြေစိုက်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။ SEO ပင့်ကူသည်နက်ရှိုင်းသောနည်းပညာဆိုင်ရာ SEO စစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောလူကြိုက်များသော web crawler တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကိရိယာကိုသုံးပြီးစျေးသည်တွေကကျိုးပဲ့နေတဲ့လင့်ခ်တွေ၊ စာရင်းစစ် redirects၊ ထပ်တူအကြောင်းအရာတွေနဲ့အခြားအရာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်။ SEO ပင့်ကူဖြေရှင်းခြင်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာ SEO များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလွန်တိကျသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကိရိယာကို Ahrefs လို All-in-one SEO tool တစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရာများ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရသိကျွမ်းသူဖြစ်လျှင်၊ ScreamingFrog သည်အခြေခံစာရင်းစစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများရှိသည့်အခမဲ့ဗားရှင်းကိုပေးသည်။
Screaming Frog SEO Spider ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
၎င်းသည်လူမှုရေးမီဒီယာပရိုဖိုင်းအမြောက်အများကိုအသုံးပြုသောအေဂျင်စီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီကြီးများအတွက်အထူးအသုံးဝင်သည်။ ပို့စ်များကိုရက်ပေါင်းများစွာ၊ ရက်သတ္တပတ်များကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီး၊ စာမူတစ်ခုစီကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေခြင်းထက်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာတွင်အချိန်ပိုပေးနိုင်သည်။
အချို့သောလူမှုရေးကိရိယာများသည်မတူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများစွာဖြင့်အားလုံး -In-one တစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့မှာဆိုရှယ်မီဒီယာစောင့်ကြည့်ခြင်းကဲ့သို့သောသီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအတွက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်ကြသည်။ ဥပမာနှစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်။
အညွန့်လူမှု - Sprout Social သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် All-in-one မှော်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းချက်သည်အသုံးပြုသူများအား post အလိုအလျောက်၊ အသေးစိတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အစီရင်ခံခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Sprout Social သည်သုံးစွဲသူအတွက်လွယ်ကူသော interface နှင့်အဆင့်မြင့်သတင်းပို့ခြင်းစွမ်းရည်များကြောင့်လူသိများသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အဓိကဝင်ငွေဖြစ်လျှင် Sprout သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်များစွာအကျိုးရှိသည်။
Hootsuite Hootsuite သည်လူကြိုက်များသောလူမှုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် post scheduling ကဲ့သို့သောပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များအပြင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော dashboard များ၊ လူမှုရေးကြော်ငြာများစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစသည့်အဆင့်မြင့်သောအင်္ဂါရပ်များကိုလည်းပေးထားသည်။
Hootsuite Demo တောင်းခံပါ
Hootsuite ၏အဓိကကွဲပြားခြားနားမှု။ စျေးနှုန်းချိုသာ ကန့်သတ်ထားသည့်စီစဉ်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုခွင့်ပြုထားသည့်အခမဲ့အလွှာတစ်ခုပင်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်၏အဖွဲ့သည်အပြည့်အ ၀ လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သောကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ဖြေရှင်းချက်ကိုလိုချင်ပါက Hootsuite သည်ခိုင်မာသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Content Management System (CMS) သည်ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာများကိုစီမံခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတွင်စာသား၊ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယို၊ အသံနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွေ့အကြုံကိုထည့်သွင်းသောအခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများပါ ၀ င်သည်။ CMS သည်သင့်အား၎င်းအကြောင်းအရာများအားလုံးကိုအစကနေ စ၍ ရေးရန်မလိုဘဲလက်ခံနိုင်သည်။
သင်၏အဖွဲ့သည်အကြောင်းအရာအသစ်များကိုပုံမှန်ဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ပါက CMS ဖြေရှင်းချက်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ CMS ကိရိယာအများစုသည်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုအတွက်အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နောက်ထပ် SEO လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေနိုင်သည်။
သင်၏လုပ်ငန်းအတွက်မှန်ကန်သော CMS ကိုရွေးချယ်ရန်ခက်ခဲသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထို tool သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏လက်ရှိအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းတာက၊ အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အများစုဟာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ အောက်တွင်လူကြိုက်များသော options နှစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Hubspot CMS Hub - အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း HubSpot သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ အရောင်းနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များအတွက် ဦး ဆောင်ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်သည်။ HubSpot ၏ CMS ကမ်းလှမ်းခြင်းသည်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များအတွက်ရေပန်းစားသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ မှတ်သားလောက်သောစွမ်းဆောင်ချက်များတွင်အကြောင်းအရာရေးသားခြင်း၊ ကြွယ်ဝသောစာသားတည်းဖြတ်သူနှင့်ကြံ့ခိုင်သောသတင်းပို့ခြင်း dashboard များပါဝင်သည်။
တောင်းဆိုမှုaHubSpot CMS သရုပ်ပြ
HubSpot ပလက်ဖောင်းသည် CRM နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကဲ့သို့သောအခြား built-in ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် All-in-one ထုတ်ကုန်ကိုလိုချင်သောစျေးကွက်သမားများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် HubSpot CMS သည်သင့်အားခွင့်ပြုသည် ရောနှောခြင်းနှင့်ကိုက်ညီ အင်္ဂါရပ်များ။ သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုအခြားပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ထားလိုလျှင်၊ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာများအတွက် HubSpot ၏ CMS ကိုအသုံးပြုနေပါကသင်လုပ်နိုင်သည်။
WordPress - WordPress သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုရန်အတွက်ပလပ်ဂင်များနှင့်တင်းပလိတ်အမျိုးမျိုးကိုတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်နည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
WordPress သည်ရှေးအကျဆုံးနှင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသော CMS ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအရာနှင့်အတူ၎င်းသည် self-host ပြုလုပ်ထားသော tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ web hosting ပံ့ပိုးသူကိုရှာဖွေရန်နှင့်၎င်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်စိတ်ကြိုက်ကုဒ်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။
အဆုံးမဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်များကိုလိုလားသောနည်းပညာကျွမ်းကျင်သောစျေးကွက်သမားအတွက် WordPress သည်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်နေပါကဤဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာများအားလုံးနှင့်အချို့ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကိရိယာများရှိနိုင်သည်။ သင်၏အခန်းကဏ္ digital သည်အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာကဲ့သို့သောအထူးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအပေါ်တွင်အာရုံစိုက်ပါကသင်၏စျေးကွက်မြှင့်တင်မှုသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသွားနိုင်သည်။
နည်းပညာအစုတစ်ခုနှင့် ပတ်သတ်၍ ကြီးသောအရာမှာသင့်ကိုယ်ပိုင်အားလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤအကြံပေးချက်များကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်းကိုထူးခြားစွာအောင်မြင်စေမည့်အရေးကြီးဆုံးသောကိရိယာများကိုကျဉ်းမြောင်းစွာသတ်မှတ်နိုင်သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်၎င်းကိုသုံးသူကဲ့သို့စွမ်းအားမြင့်မားသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိပါ လမ်းညွှန်အဖွဲ့သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း လေးနက်သောရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုရောက်စေရန်သင်၏နည်းပညာအဆင့်ကိုကျော်လွန်ပါ။
ထုတ်ဖော်: ဤဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြု Affiliate လင့်ခ်ရှိပါတယ်။
Tags: ahrefsAsana ဟာCRMဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုMartech အစုတခုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲHubspot စင်တီမီတာဒီထက်နှောင့်အယှက် CRMmailchimpမာ့ခ် Andreessenစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ stackစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ stackMartech stackစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအချစ်ရောင်းသူရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationလူမှုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုWordPress
Izabelle Hundrev သည်ချီကာဂိုအခြေစိုက်အကြောင်းအရာစာရေးဆရာဖြစ်သည်။ စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းကိုတစ်သက်တာလုံးသူမသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်မစ်ဆူရီတက္ကသိုလ်မှသတင်းစာပညာဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ဘွဲ့ရပြီးနောက် Izabelle သည် B2017B အရောင်းလုပ်ငန်းတွင်သူမစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁.၅ နှစ်ရောင်းပြီးနောက်သူသည်စာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များသို့ပြန်သွားပြီးအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။